soosaaray jilif Yohimbe - J & S Botanics
[Latin Name] Corynante Yohimbe [Plant Source] Yohimbe jilif laga soo ururiyey Africa [sooc] Yohimbine 8% (HPLC) [Imaansho] Red Brown Fine Powder [walxaha size] 80 mesh [Loss on qalajiyo] 5.0% [culus Birta] 10PPM [ qase soosaaray] etanoosha [Kaydinta] Store ee aagga qabow & engegan, ka fog iftiinka ayaa si toos ah iyo kulaylka hayn. [Xidhmada] buuxiyey oo ku yaal warqad-fuusto iyo laba caag-bacaha gudaha. miisaanka Net: 25kgs / durbaanka [Waa maxay yohimbe] Yohimbe waa geed in koraa Africa, iyo barbariyiintiina waxaa ay leeyihiin ...
[Name Latin] Corynante Yohimbe
[Plant Source] Yohimbe jilif laga soo ururiyey Africa
[Sooc] Yohimbine 8% (HPLC)
[Imaansho] Red Brown Fine Powder
[Loss on qalajiyo] 5.0%
[Culus Birta] 10PPM
[Qase Warbixiinta] etanoosha
[Xidhmada] buuxiyey oo ku yaal warqad-fuusto iyo laba caag-bacaha gudaha. miisaanka Net: 25kgs / durbaanka
[Waa maxay yohimbe]
Yohimbe waa geed in koraa Africa, iyo barbariyiintiina waxaa loo isticmaalaa jilif cayriin iyo xarunta la Daahiriyey si kor loogu qaado rabitaanka galmada iyo waxqabadka. Yohimbe ayaa loo isticmaali jiray qarniyo shahwo. Waxa uu xitaa la sigaar cabbin sida hallucinogen ah. Maalmahan, Yohimbe soosaaray jilif waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu daaweeyo kacsi la'aanta ragga iyo dumarka.
Marka daama, Yohimbe waxaa hayeyna marinada dhiigga, iyo saamaynta tamar Yohimbe ee ka awooddiisa si ay u kordhiyaan u socodka dhiigga xubnaha taranka yimaado - iyo waxay khuseysaa rag iyo women.Aside labadaba ka saamaynta shahwo ay, cilmi baaris cusub ayaa sidoo kale muujinaya, in Yohimbe uu leeyahay awood saamaynta antioxidant.
Yohimbe jilif Benefits Warbixiinta £ º
1.It ay shahwo ragga iyo dumarka labadaba
2. Iska loo isticmaalo si ay ula dagaalamaan impotence
3.It lagu muujiyay in ay antioxidant awood leh
4.It kaloo ka caawisaa looga hortago halbowleyaasha ka is dhaafiyay
5.It caawisaa qaab galmo, la kordhiyo libido
6.Ithas sidoo kale lagu muujiyay si looga hortago wadne
Previous: Warbixiinta Wolfberry
horumarinta galmada dabiiciga ah
Valerian xididka laga soosaaray
abuur laga soosaaray rummaanka